Falanqeynta: Chelsea vs Arsenal Chelsea oo Rikoor Weyn ka Jabi doono haddii laga badiyo kulankan
Friday, December 14th, 2018 - 01:42:55
Wednesday January 10, 2018 - 10:02:11 in Wararka by
Arboco - England
Kooxda chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge ku soo dhawayn doonta kooxda Arsenal kulan ka tirsan semi-finalka League cup-ka.
Labada kooxood ayaa markii 2-aad wada ciyaarayaya todobaad gudihii maadama ay 3 bishan bar-baro 3/3 ah ku galeen garoonka Emirates.
Kooxda Arsenal ayaa kulanka soo galaysa iyada oo isha ku haysa guul kadib kadib markii ay hal kulan oo kaliya badisay 5-tii kulan ee ugu dambaysay tartamada oo dhan.
Chelsea ayaa iyadu kulanka soo galaysa iyada wax yar ka fiican Arsenal kadib markii ay labadii kulan ee ugu dambeeyay bar-baro gashay
Wakhtiga: 10:45 Habeenimo
-WARARKA LABADA KOOX:
Antonio Conte ayaa la filayaa in uu shax xoogan kala hor iman doono Arsenal kadib barbarihii niyadjabka lahaa ee ay kooxdiisu la soo gashay Norwich City ee kulankii FA Cupka waxaana la filayaa in Eden Hazard uu taam buuxa u yahay kulankan isla markaana uu shaxda Blues ku soo bilaaban doono. Hazard ayaa seegay kulankii FA Cupka ee Chelsea lagu soo qasbay in ay kulan ku celis ah la ciyaari doonto Norwich City.
Antonio Conte ayaan qabin wax walwal dhaawacyo ah wuxuuna haystaa koox uu ka soo xulan karo shaxda uu doonayo isaga oo muhiimad wayn siin doona in kooxdiisu ay soo gaadho finalka League Cupka maadaama ay tahay fursad uu ku dhaw yahay in uu koobkan kooxdiisa la qaadi karo.
Dhinaca Arsenal waxaa wali jira xidigo muhiim ah oo Arsene Wenger dhaawac kaga maqan iyo waliba kuwo kale oo ay tahay in uu xaaladooda hubin doono xili danbe si uu go’aan uga gaadho in uu ku soo bilaabi doono kulanka Chelsea. Difaaca dhexe ee Laurent Koscielny ayuu shaki jiraa wuxuuna qabaa dhaawac la hubin doono haddii uu ka soo kabsan karo kulankan.
Laakiin waxaa wali Gunners dhaawacyo kaga sii maqnaan doona Olivier Giroud , Aaron Ramsey iyo Nacho Monreal halka uu sidoo kale shaki ku jiro taam ahaansha buuxa ee Sead Kolasinac. Dhinaca kale Arsene Wenger ayaa hubin doona taam ahaanshaha Granit Xhaka iyo Shkodran Mustafi kuwaas oo xaaladooda la hubin doono ka hor kulaknan.
●Chelsea ayaa badisay afar ka mid ah shantii kulan ee ugu dambeysay oo ay ku wajahday Arsenal League cup-ka, oo ay ku jirto semi-finalkii 1997/1998.
●Marka kaliya ee ay Arsenal u gudubtay wareega xiga iyada oo la ciyaaraysa kooxda chelsea tartankan ayaa yihimid 1976-77.
●Gunners ayaa badisay kaliya hal kulan oo ka mid ah sagaalkii kulan ee ugu danbeysay ee ay booqdeen Stamford Bridge tartamada oo dhan waxana uu kulankaas ahaa mid ay Arsenal ku badisay 5/3 oo ahaa Premier league.
●Blues ayaa wareega xiga u gudubtay 4 ka mid ah 5-tii kulan ee ugu dambaysay ee Semi-finalka tartanka waxana ay kala ahaayeen sanadihii (2005, 2007, 2008 Iyo 2015).
●Kulankan ayaa ah midkii 15-aad ee ay Gunners soo gaarto semi-finalka tartanka kaliya Liverpool ayaa ka badan iyada oo gaartay 17 kulan.